Ukugcwaliswa kwe-Tube kanye noMshini Wokuvala uphawu - Micvd.com
Kusetshenziselwa umshini wokugcwalisa nge-tube othomathikhi nowokufaka uphawu lokugcwalisa ama-polyethylene namashubhu amisiwe ngamagiya, okhilimu noma obunye uketshezi, ukubabopha ngomoya oshisayo, usuku lokugxoba kanye / noma i-batch No. nokusika ipulasitiki eyeqile kushubhu eliphela, elivele ngesikhathi ishubhu uphawu.
NPACK Ama-tube filler Umshini womshini wokugcwalisa ugcwalisa imikhiqizo ngensimbi ye-cylindrical iron / laminate / plastiki namashubhu aseduze. Amathambo omshini we-tube filler osukela ku-35 kuya ku-150 amashubhu / umzuzu atholakala ngemodeli ehlukile njengomshini wokugcwalisa weshubhu lakwa-Linear, umshini wokugcwalisa ishubhu wokuhlangabezana nezidingo zanamuhla zokufakwa kwe-tube embonini ehlukene. umshini wethu wokugcwalisa i-tube filler ungagcwalisa imikhiqizo ye-viscous ne-semi-viscous, njenge-Gel, i-shampoo, i-ointment, izimonyo, umuthi wokuxubha, ukhilimu / ijeli, i-adhesive, ushokoledi, umsunguli, imayonnaise nezinye eziningi. Imishini emisha ye-tube filler yenzelwe ngokukhethekile i-ergonomically eklanyelwe ukuqinisekisa ukuthi izindawo ezisebenzayo ezinobungane ziyafinyeleleka kalula ukusetha, ukushintshwa kanye nokunakekelwa. Ngakolunye uhlangothi, ama-filar-chain tube fillers angase avele isikhathi eside kodwa asaklanyelwe engqondweni. Iningi lethu lemodeli yomshini wokugcwalisa i-tube filler kufaka phakathi umshini wokugcwalisa we-lamised tube, umshini wokugcwalisa i-tube, umshini wokugcwalisa ishubhu, umshini wokugcwalisa ishubhu, umshini wokugcwalisa ishubhu, umshini wokugcwalisa isivinini esikhulu, umshini wokugcwalisa ishubhu, imishini yokugcwalisa yomshini wepulasitiki, umshini wokugcwalisa we-tubeion, umshini wokugcwalisa ishubhu lemithi, umshini wokugcwalisa ishubhu umuthi, umshini wokugcwalisa ukhilimu wokugcoba, umshini wokugcwalisa owoyela.
Umshini wokugcwalisa i-Tube uzosetshenziselwa ukugcwalisa nokubopha amashubhu afana namabhubhu wam lamoni, i-aluminium kanye namashubhu epulasitiki emikhiqizo engagxili. Umshini wokugcwalisa i-Tube uzosebenza ngokuzenzakalelayo ukugcwalisa amashubhu we-laminate, amashubhu e-aluminium noma amashubhu epulasitiki ngemikhiqizo engagxili (imikhiqizo engagxili njengekhilimu, ijeli kanye namafutha.) Bese usayina ingaphansi yeshubhu ngemikhiqizo egcwalisiwe enomshini wokushisa noma crimper. Amashubhu anikezwa ngesandla kwi-feed feed yeshubhu. I-tube izodluliswa nge-chute yokudlulisa eyodwa bese ijika phansi phezulu. Ishubhu lihanjiswa ngesondo elijikelezayo liye esiteshini sokudonsela amanzi. Umkhiqizo oqinile owenziwe ngomshini okhiqizwayo osezingeni eliphakathi nendawo uzodluliselwa ngomkhumbi noma ngevayela elixhunyiwe kuxhumeke emshinini wokugcwalisa. Imikhiqizo esezingeni eliphakeme izonikezwa emshini wokugcwalisa ngepompo le-vacuum noma elenziwe ngendle, ngokuya ngomshini wokugcwalisa we-skid design. Ishubhu ligcwele umkhiqizo ngevolumu eguquguqukayo. Ngemuva kwalokho ishubhu egcwalisiwe idluliselwa esiteshini se-seal ukuze isinameke ngaphansi kweshubhu ukuthi kungukushisa komshini noma i-laminate crimper. I-tube evaliwe ikhishwa ngaphandle komshini osezansi komfula ngohlelo lokuhamba.
Amashubhu Ukugcwaliswa Kwamashubhu nokupheqa iMishini kusabalalisa itafula etafuleni elinenkomba yokujikeleza, kukhombisa ishubhu bese ligcwalisa amasheya ngokufaka uphawu lokushisa kanye nogwemayo, noma ukugoqa nokugoba amashubhu wensimbi. Ilungele izinsiza ezahlukahlukene, ukugcwaliswa kwethubhu kanye nemishini yokuphawu kungagcwalisa okhilimu, i-lotion, imikhiqizo yokudla, imithi yemithi, i-greats, ama-gels, glues, pastes, futhi, ngezikhathi ezithile, izimpuphu. Yonke imishini yethu yokugcwalisa ishubhu yemishini yokuzenzela kanye neyokufaka uphawu kufaka phakathi ukulayisha kwe-othomathikhi, ukujikisa, ukugcwalisa, ukubeka uphawu nokufaka amakhodi amashubhu epulasitiki noma awensimbi anejubane elisuka kumashubhu angama-30 kuye kwangama-80 ngomzuzu nosayizi ofinyelela ku-300 ml.
Umshini Wokugcwalisa I-Tube kaPulasitiki Ozenzakalelayo Kanye Nomshini Wokubopha Amakhulu
Umshini unesakhiwo esisebenzisanayo, amapayipi azenzakalelayo kanye nengxenye yokuhambisa evaliwe ngokuphelele.
Umshini usebenza isistimu yokusebenza okuzenzakalelayo ngokuphelele ukuqedela amapayipi, ukuwasha, ukumaka, ukugcwalisa, ukuncibilika okushisayo, njll.
Inqubo yonke yokubopha, ukufaka amakhodi, ukulungisa nokulungisa imikhiqizo eseqedile.
Indlela ye-pneumatic isetshenziselwa ukunikeza nokugeza amapayipi, futhi isenzo sinembile futhi sithembekile.
Kufanele: ipayipi lepulasitiki, ipayipi elihlanganisiwe noma ipayipi lensimbi.
Design Idizayini Ecacile
Parts Izingxenye Zokushayela Zivaliwe ngokuphelele
Wash Ukuhlanza & Ukondla kwe-Tube yomoya
◆ Ukulawula Ukushisa Okushisa Intelligent kanye nohlelo Lokuphola
Kulula Ukusebenza futhi uguqule
Parts 316L Izingxenye Zensimbi Engagqwali Zokuxhumana ukuze uhlangane ne-GMP Standard
◆ I-Safe Interlock Shutdown uma umnyango uvulekile
Protection Ukuvikelwa Okugcwele Kunikezwe
Process Inqubo yokuSebenza ezenzakalelayo kusuka ku-Tube Iyalayisha Kwenziwe Ukuqedwa kwemikhiqizo
◆ Ukuzilungiselela Okuzenzakalelayo Kwenziwe Yi-Photoelectric Induction
Usuku lokufaka Amakhodi
Magaz Umagazini Okondla Nge-Tube Okuzenzakalelayo
◆ Guqula Izingxenye
Ukugcwalisa ivolumu: 50-300ml / unit (Iyakwazi ukuguqulwa)
Ukugcwalisa ukunemba: ≦ ± 1 ﹪
Amandla: 2400-3000unit / ihora, Adibleable
Ububanzi be-Tube: Φ10-50 mm
Ubude be-Tube: 50-200mm
Ivolumu yenkohliso: 40L
Amandla: 380V / 220V (Uyazikhethela)
Ukucindezela komoya: 0.4-0.6 MPa
Isithuthi esisezingeni elifanele: 1.1KW
Amandla omshini: 5kw
Imoto yangaphakathi yangaphakathi: 0.37kw
I-Convulsions motor: 0.37kw
Ubungako: 1950 × 760 × 1850 （mm）
Isisindo: Cishe ngo-750 Kg
Ukugcwalisa i-Aluminium Tube kanye nomshini wokuvala uphawu
Ifanela ukugcwalisa, ukubeka uphawu kanye nosuku lokuphrinta imikhiqizo ethola ukupakishwa kwamashubhu we-chemistry yansuku zonke, ekhemisi, ukudla kanye ne-chemistry njll imboni, njll.
Umshini wawuphawulwa ngesakhiwo semishini, ukusebenza okuzinzile, isivinini esikhulu, ukusebenza kahle okuphezulu, umsindo ophansi, ukwakheka okulula, ukusebenza okusebenzayo nokulungiswa kanye nephutha elincane.
faka ngokuzenzakalelayo ishubhu nesikhundla, uhlelo lokulawula lwe-PLC, shisa ishubhu langaphakathi nomoya oshisayo, isikhundla esinembile.
Ingalungisa futhi ibonise esikrinini sokuthinta ivolumu yokugcwalisa ngokuzenzakalelayo, ingumshini ofanele wokufaka uphawu lwentambo yepulasitiki ngoba libukeka kahle futhi lithembekile.
Idizayini eyakhiwe kanye ne-auto tube feed. Ukushayela ingxenye kuvalwe ngokuphelele.
Ukuhlanza i-Tube nokunikeza ukumaka uphawu lokumaka, ukugcwalisa, ukugoqa, ukubeka uphawu, ukuphrinta ikhodi kanye nokuphuma komkhiqizo oseqediwe konke okwenziwa uhlelo oluzenzakalelayo oluzimele.
Ukugeza izithambo nokuncelisa kuqhutshwa ngocele, kunembile futhi kuthembekile.
Ubungako: 1950 × 760 × 1850 (mm)